गाउँखाने कथा ४१ (Nepali Gau Khane Katha)
अपडेट: गाउखाने कथा ४१ को उत्तर दांत हो। उत्तर मिलाउन प्रयास गर्ने सबैलाइ धन्यबाद,यसपटक भने कसैले पनि उत्तर मिलाउन सक्नुभएन। अर्को पटक सजिलो गाउंखाने कथा सोध्ने छु।
पल्टन-पल्टन दुई पल्टन आए जति चट, के हो?
im gokul sharma from new delhi
hello dear sir tapai ko blog maile pade ani malai ramro lagyo ra sir ma tapailai pani aagrh gardchhu ki mero pani 1 ota sano blog chha plz tapai pani visit gari dinu hola www.arghakhachionline.blogspot.com
म त सधै आउछु खुस्स पढ्छु,मनमा यसो होला भनेर सोच्छु अनि निस्कन्छु है.. पढ्नै मजा लाग्यो मलाई त हा हा।
यसको उत्तर हामीले आफूलाई हेरौ - बुझौ - छामौ - - , यति बाट पनि उत्तर आउन
सकेन भने तपाई जसको अगाडी हुनुहुन्छ बहालाई नियालेर खुट्टा देखि टाउको सम्म
हेर्नुस , हैन तपाई एक्लै हुनुहुन्छ भने ऐना अगाडी उभिनुस अनि सोच्नुस --
उत्तर यति भित्रै बाट पाउनु हुने छ :)
( उत्तर मिलेन भने मात्रै भन्छ )
यो गाउं खाने कथाको उत्तर त गार्हो परेछ कि क्या हो? लुना जी ले दिएको क्लु ले सजिलै उत्तर जान्न सकिन्छ।
यसपटक भने कसैले पनि उत्तर मिलाउन सक्नुभएन। अर्को पटक सजिलो गाउंखाने कथा सोध्ने छु।